Akhriso: Madaxweyne Farmaajo oo amar deg deg ah kusoo rogay hey’addaha dowlada iyo madaxdii waqtigooda dhamaaday – Kismaayo24 News Agency
by Tifaftiraha K24 12th February 2017 067
Madaxweynaha soomaliya maxamad c/llahi farmaajo ayaa soo saaray amar lagu xanibaayo dhaq dhaqaaqa bangiga dhexe ee soomaliya.
Madaxweyne farmaajo waxa uu amar ku bixiyay in gabi ahaan la hakiyo akoonada hey’addaha dowlada iyo shaqsiyaadka ku lug leh dowladii hore ee watqigeeda uu dhamaaday.
Amarkaan ayaa sidoo kale waxaa lagu xanibay in hey’addaha dowlada ay akoono gaar ah ka sameystaan bangiga dhexe ee soomaliya iyo waliba bangiyada kale ee gaarka loo leeyahay kuwaasi oo xamar ku yaala.
Amarka madaxweynaha ayaa waxaa uu si toos ah ugu wajahanyahay masuuliyiintii hore ee dowlada waqtogeeda uu dhamaaday maadama dalka uu galaayo marxalad kala guur ah sida caadada ahna ay madaxda markuu isbedel dhaco ay sameeyaan xatooyo dhaqaale iyo wax isdaba marin musuq maasuq.
Waa amarkii ugu horeysay oo uu bixiyay madaxweynaha cusub ee soomaliya kaasi oo qeyb ka ah balan qaadkiisii ku aadanay in uu si xoogan ula dagaalami doono muqus maasuqa iyo in lagu tagri falo hantida qaranka.
TOP NEWS: Madaxweyne axmad madoobe oo si cad ugu sheegay danjire keating mowqifkiisa ku aadan Madaxweyne Farmaajo iyo sida uu….
War cusub: Alshabaab iyo AMISOM oo isku fara saaray gobolka hiiraan iyo ciidamada Dowlada oo..
DEG DEG:- Shirkii Xamar oo Fashil kusoo dhamaaday & Warsaxafadeed Gordhow Laga soo saarayo
Tifaftiraha K24 16th December 2015
Gudoomiyaha Gobalka Bari Puntland oo Xalay Weraar lagu qaaday
Diyaarada Qatar Airways oo Somalia ka shaqabilabaysa